Afar in Line
Afar in Line - Guudmarka
Ciyaartan waa playable ka dhanka ah computer ah. Waxaad la calaamad O ciyaaro, iyo computer ka ciyaara la calaamad X ah. Ujeedadu waa inaad sameyso 4 calaamadood oo isku xigta oo adiga kuu gaar ah, isla xariiqda, ama qotonta.
Dhaqaaqo A ka kooban yahay in gelinayn calaamad adiga kuu gaar ah oo ku saabsan mid ka mid ah kuwa 13 columns, at aad dooratay. Calaamadu waxay hoos u dhici doontaa dhinaca salka tiirka, ilaa ay ka gaarto calaamad kale. Taas awgeed, tiirarka waxaa laga buuxin doonaa hoos-up.